Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Khilaafka Siyaasadda DF-ka iyo Waddooyinka Caasimadda Oo Xiran.
Wednesday April 04, 2018 - 09:37:40 in Wararka by Super Admin
Inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa xiran maalintii labaad oo xiriir ah arrinkaas oo saameyn ku yeeshay kumanaan qof oo ka xoogsada suuqyada kala duwan ee magaalada caasimadda ah.
Ciidamo farabadan oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka ayaa lagu arkayaa waddooyinka muhiimka ah sida Makka Al-mukarama iyo wadada wadnaha waxayna gaadiidka dadweynaha udiidayaan in ay isticmaalaan waddooyinka.
Xirnaashiyaha waddooyinka ayaa loo sababeynayaa kulan lagu sheegay Xasaasi oo xildhibaannada Baarlamaanka garabka taageersan Kheyre ay ku yeelan doonaan meel ku dhow madaxtooyada Villa Somalia.
Ciidamada Koofiya casta ee sida gaarka ah u taabacsan Farmaajo iyo ciidamo kale oo daacad u ah Xasan Cali Kheyre ayaa ilaalo ka haya albaabka laga galo xarunta Baarlamaanka waxaana laga cabsi qabaa in ay ku lug lahaadaan fowdo ka dhacda xarunta.
Maleeshiyaad farabadan oo ilaalo u ah xildhibaanada kasoo horjeeda Mooshinka Jawaari ayaa iyana lagu arkayaa wadada Makka Al Mukarrama, xiisado dhanka siyaasadda ah ayaa laga dareemayaa xarumaha dowladda Federaalka kadib markii ay fashilmeen dhammaan isku dayadii ladoonayay in lagu xalliyo khilaafka u dhaxeeya Kheyre iyo Farmaajo.
Wararkii ugu dambeeyay caabuqa Covid19: Mareykanka oo kumanaan ruux ay ku dhinteen.
Wararkii ugu dambeeyay ee Carona Virus: dhimasahada Mareykanka oo ku dhow 50,000.
Wararkii Ugu dambeeyay: Cudurka Carona oo kumanaan ku dilay Mareykanka iyo Yurub.
Wararkii Ugu dambeeyay: Dadka udhimanaya Carona oo sare ukacay.
Wararkii Ugu dambeeyay ee xaaladda Janaale iyo Weeraro maanta ka dhacay.
Wararkii Ugu Dambeeyay: Trump oo Carona laga waayay iyo kumanaan qof oo uu Talyaaniga ku dilay.